ePaschim Today संघर्षकी पर्याय : उमादेवी बादी
दीर्घराज उपाध्याय ।
ईतिहास सुत्नेहरुको लेखिदैन । न त थाक्नेहरुको लेखिन्छ । उ कुन कुलमा जन्मियो ? कुन जातमा जन्मियो ? त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । हो, ईतिहास संघर्ष गर्नेहरुको लेखिन्छ । जो गरिवी, अभाव, पीडा, तनाव र शोषणका बीच पनि दरो भएर उभिईरहन सक्यो । ईतिहास त्यसैको लेखियो । त्यसैको लेखिन्छ ।
अभाव, पीडा र शोषण बिरुद्धको लामो र अविराम संघर्षले ईतिहास रच्ने तिनै मध्येकी एक हुन्, उमा देवी वादी ।
त्यही अविचलित संघर्षले उनी वादी समुदायको नायक मात्र भईनन । विश्वकै प्रतिष्ठित समाचार संस्था वीवीसीले छनौट गरेका संसारका १०० प्रभावशाली र प्रेरणादायी महिलाको सूचिमा १० औं स्थानमा पर्न सफल भईन ।
२०१८ सालमा सल्यानमा जन्मिएकी उमा परिवारकी माहिली सन्तान थिईन । उनीभन्दा अघि एक दाई थिए । उनीपछि पाँच बहिनी । उनकी आमा बिष्ट (मालिक) को घरमा जादै थिइन । बाटैमा आमाले उनलाई जन्म दिईन ।
वादी समुदाय घुमन्ते जाती । ठूला बडाको घरमा बिहा, ब्रतबन्ध तथा खुशीको कामकाजमा नाचगाँन गर्ने जाती । त्यही नाचगान गरे वाफत प्राप्त हुने अन्न र पैसाले वादी समुदायको जिविका चल्थ्यो । एकै ठाउमा बसेर जिविका नचल्ने हुदा उमाका बुवा आमा ६ महिना तराई झर्थे ।
उनी ६ महिनाकी हुदा परिवारसंगै पहाडबाट तराई झरिन । दुःखको पहाड उनीसंगै तराई झ¥यो । वर्षात, बाढी र झरीमा ओत लाग्ने ठाउ नपाएपछि दुःखको त्यो पहाड अझै अग्लो हुन्थ्यो ।
सल्यानका ठकुरी कैलालीको महादेवली र धनगढीमा बसोबास गर्थे । उनका बुुवा आमा नाचगानका लागि सत्ती हुदै महादेवली र त्यहाँबाट धनगढीसम्म पुग्थे । जहाँ बुवाआमा जान्थे । पछिपछि उनी हुन्थिन । बुवाआमा एक ठाउमा केही दिन बस्थे । र त्यति नै दिन उनी छेउको स्कुल जान्थिन । धनगढी सत्ती जोड्ने अहिलेको हुलाकी सडकसंग जोडिएका नपढेको कमै स्कुल छन् । तर कुनै पनि स्कुलमा उनले धेरै समय पढ्न पाईनन ।
उनका बुवा चाहन्थे, छोरी अक्षर चिन्नेसम्म होस । रुपैया चिन्ने भए पुग्यो । उनका बुवा भित्र एउटा डर थियो । छोरीलाई धेरै पढाउनु हुन्न । धेरै पढे, भाग्छे । उनी अक्षर चिन्ने भईन । त्यो संगै पढाईमा पनि बिराम लाग्यो ।
छोरी जन्मिदा दुःखी हुने समाजमा वादी समुदाय यस्तो थियो, जहाँ छोरी जन्मिदा खुशियाली छाउथ्यो । नाचगान हुन्थ्यो । ऋण खोजेर भएपनि सुत्केरीलाई एक छाक कुखुराको झोल खुवाईन्थ्यो । उमा त्यही समुदायमा जन्मिएकी थिईन ।
छोरी हुर्किदै गर्दा परिवारमा अझै खुशी छाउथ्यो । कारण, परिवारमा कमाउने एक जना थपिदै थियो । बुवा आमा नै शारिरिक र मानसिक रुपमा तयार नहुदै कलिलो उमेरमै छोरीलाई पैसाकै निम्ति पुरुषसंग सुत्न बाध्य तुल्याउथे । प्रतिवाद गर्नु परिवारको चाहनाको बर्खिलाप हुन्थ्यो । यसरी कलिला मुनाहरु हरेक दिन गरीवी र बाध्यताका नाममा सिकार भईरहन्थे ।
उनीहरुको सपनाको कुनै मूल्य थिएन । उनीहरुको भावनाको कुनै मूल्य थिएन । बस्, ग्राहक उनीहरुको शरीरको मूल्य दिन्थे । त्यही मूल्य असुल गरेर ग्राहक आफ्नो बाटो लाग्यो । र उनीहरु अर्को ग्राहकको बाटो कुर्थे । मानौ, उनीहरुको शरीर पसल थियो । बस्,पसल । उनीहरु सामान । यद्दपि म बेचिदैन भन्नसक्ने वा भन्ने अवस्था उनीहरुको थिएन । किनकी आफैलाई बेचेर प्राप्त हुने आम्दानीबाट उनीहरु खुशी हुन्थे कि हुन्थेनन, थाह छैन, तर त्यसैले एक छाक पेट भर्थे, जिविका चलाउथे । यसरी केही पैसाका खातिर हरदिन बेचिनु उनीहरुको दिनचर्या थियो । दिनमा जति पटक बेचियो, त्यति नै आम्दानी हुन्थ्यो । त्यसैले को कति पटक बेचिने एक किसिमको प्रतिस्पर्धा झै हुन्थ्यो, उनीहरुबीच ।
यही वादी चेलीहरुको नियती थियो । यही नै जिन्दगी । ग्राहकलाई यौन सुख दिएर परिवारको जीविका चलाउने बाध्यताकै अर्को नाम जिन्दगी थियो । जहाँ सुखको ईन्द्रेणी सपनाको आकाशमा कहिल्यै खुलेर देखिएन ।
प्रेम, बिहा र घरजम जस्ता शब्दहरु बादी चेलीहरुको सपनाभित्र अट्दैन थिए । शरीर थाकेपनि । गलित भएपनि । जतिसुकै पीडामा भएपनि । केही पैसाका लागि मुस्कुराएर पुरुषसंग सुत्नु उनीहरुको नियति थियो । यही नै नित्यकर्म । र यही नै जिन्दगी ।
कस्ले भन्यो सपनाको रंग हुदैन ? हुन्छ । तर त्यो रंग पनि सम्पन्नता र समृद्धिले निर्धारण गर्ने रहेछ । उनीहरुको सपनाको रङ निष्पट कालो थियो । सपना त्यो हो, जो बाँचिरहेको जिन्दगी भन्दा उचो हुन्छ । जसको प्राप्ती सहज हुदैन । कतिपय मान्छेहरु सपनाको त्यही उचाई मुन्तिर थिचिएका हुन्छन । एक चोटी लडे पछि त्यो उचाई हेर्ने दुस्साहस गर्दैनन । तर कतिपय दुस्साहसी हुन्छन्, जो एक चोटी थचारिएर निराश हुदैनन । हार्दैनन । र थाक्दैनन पनि । हो, नथाक्ने, नहार्ने अनि निराश नहुनेहरु नै त्यो सपनाको उचाईमाथि बिजय पाउछन् । उमा पनि दुस्साहसी थिईन ।
सल्यानबाट उनका बुवाआमासंगै वादी समुदायका अरु केही परिवार पनि कैलाली झरेका थिए । कसैको पनि स्थायी ठेगाना थिएन । उनीहरु पहाडबाट झरेपछि सत्तीमा बस्न थाले । स्थानीयले त्यहाँबाट लखेटेर कर्णाली नदी किनार पु¥याए । वर्षामा उर्लेर आउने कर्णालीले उनीहरुलाई त्यहाँबाट पनि लखेट्थ्यो । ओभानोको खोजीमा सत्तीको स्कुलमा पुग्थे । त्यहाँ ओत लागेका अरुले राहत पाउथे, तर वादी समुदाय भने राहतबाट पनि बञ्चित हुन्थ्यो । यसरी कहिले उनीहरुलाई बाढीले लखेट्थ्यो । कहिले कथित उपल्लो जातीले ।
नारायणपुरका एक जना दयालु प्रधान थिए,मगर जातीका । जसले २९ सालतिर वादी समुदायलाई प्रति कठ्ठा दुई सय रुपैया लिएर बस्न दिए । एक कठ्ठा जोड्ने भाग्यमानी हुन्थ्यो । धेरैले मुस्किलले पाँच धुर जोडेका थिए । त्यही पाँच धुरले बादी समुदायको एउटा स्थायी ठेगाना बन्यो । बादी समुदाय बसोबास गर्ने त्यही वस्ती बिष्णुकान्तिपुरका रुपमा चिनिन थाल्यो ।
त्यो समय सत्ती निकै चर्चामा थियो । पहिलो, व्यापारले । सत्ती त्यतिबेला कैलालीको महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र थियो । दोस्रो, विष्णु कान्तिपुरीका कारण सत्ती चर्चामा थियो । जहाँ वादी समुदायको बसोबास थियो । कानुनतः देहव्यापार दण्डनीय थियो । बिष्णु कान्तिपुरमा भने देहव्यापार हुने कुरा ‘ओपेन सेक्रेट’ थियो ।
सत्तीको नाम पनि थियो । वदनाम पनि थियो । जे भएपनि सत्ती चर्चामा थियो । त्यही बदनाम वस्तीमा हुर्किएकी उमा भित्र बिष्णु कान्तिपुरलाई बदनामीबाट बाहिर निकाल्ने अठोट पनि हुर्किदै थियो । उनी बिष्णुकान्तिपुरको मुहार फेर्न चाहन्थिन । उनी बादी महिलाप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फेर्न चाहिन्थिन । कलिलो उमेरमै देह व्यापारमा संलग्न बादी चेलीहरुले कुमारी आमा भएकै कारण भोग्नु परिरहेको पीडा अन्त्य गर्न चाहिन्थन ।
वादी चेलीहरुका निजी सपना हुन्थेनन । र भोको पेटमा ठूला सपना देख्नु अपराध जस्तै । बस, एक छाक पेटभरी खान पाए पुग्यो । एक छाक खानाका लागि काखे बालकलाई बाहिर राखेर कसैको प्यास मेट्न कोठा भित्र पस्नुपर्ने । न चाहेरै हास्नु पर्ने । पीडामा पनि रुन नपाईने । दुःखमा पनि हास्नै पर्ने ।
बिष्णुकान्तिपुर छेउमै कर्णाली निरन्तर बगिरह्यो । कर्णाली आफू मात्र बगिरह्यो । तर बगाएन वादी चेलीहरुका पीडा र बाध्यता । कर्णाली जस्तै निर्बाध बग्ने । पवित्रताको परीक्षा दिनु नपर्ने । अपमानित पनि हुनु नपर्ने । यस्ता असंख्य चाहनाहरु उनीभित्र पनि मौलाएका थिए ।
न्यायका लागि प्रहरी कहाँ जादा त्यहाँ न्याय पाउनुको साटो उल्टै प्रताडित हुनुपथ्र्यो । प्रहरीले उल्टै प्रश्न गर्थे, आजको रात यही बिताउ, कति रुपैया लिन्छस ?
वादी समुदायका चेलीमाथि हेरिने समाजको दृष्टिकोण नकारात्मक थियो । कथित उपल्लो जातीहरुलाई उनीहरुको योवन चल्थ्यो । यौन चल्थ्यो । तर उनीहरुको पानी चल्दैनथ्यो । राति सुटुक्क विष्णुकान्तिपुर पसेर यौन प्यास मेट्नेहरु घर फर्किदा साधु भईसकेका हुन्थे । तिनै साधुबाट जन्मिएका थुप्रै सन्तानले कहिल्यै बुवाको नाम पाएनन । आमाले पनि उसको बुवा फलानो हो भनेर चिनाउने दुस्साहस कहिल्यै गर्न सकेनन । एक छाक गासका लागि आफ्नो यौवन सुम्पने उनीहरु भने बद्नाम भईरहे । तर पैसाले यौवन किन्ने मालिकहरुको सधै नाम भईरह्यो ।
छोराले मेरो बुवा खोई भनेर प्रश्न गर्दा निरुत्तर हुनुपर्ने बाध्यता बोकेका तमाम आमाहरुमा सगर्व छोराको बुवा चिनाउने साहस भर्न चाहन्थिन । र बुवाको पहिचान नभएकै कारण अनागरिक भईरहेका सन्ततीहरुलाई देशको जिम्मेवार नागरिक बनाउन चाहन्थिन । पढाई पुरा गर्न पनि नागरिकता चाहिने । नागरिकताका लागि बुवा चाहिने । र बुवाको नागरिकता चाहिने । उमा भने बुवा बिना नै बादी महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चाहन्थिन । र देह व्यापारमा संलग्न भएका कारण यौन रोगको शिकार भईरहेका वादी महिलाहरुलाई सम्पूर्ण रोगको उपचार राज्यबाट निशुल्क हुने व्यवस्था गराउन चाहन्थिन । र आर्थिक अभाव र बाध्यताका नाममा चेलीहरुलाई देह व्यापारमा संलग्न गराउने बादी अभिभावकहरुलाई बिकल्प सहित त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न चाहन्थिन । रोजगारको ग्यारेण्टी, गाँसवास र आवासको व्यवस्था राज्यबाट भए देह व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको विश्वास थियो ।
समय भन्दा क्रुर केही छैन । र समय भन्दा बलवान पनि केही छैन । समयको फेर समातेर जसले तर्नसक्यो, कर्णालीको भंगालो, त्यसको जिन्दगी पार भयो । तर्न नसक्नेहरु कि समयको नदीमा बगे । कि भुमरीमा बिलाए । कि नदी किनारमा पुर्पुरोमा हात राखेर भाग्य र भगवानलाई सरापीरहे । उमा भने अपवाद थिईन ।
उनी भाग्यमा विश्वास त गर्थिन । तर आफ्नो भाग्य आफै बनाउन सकिने विश्वास अझ बलियो थियो, उनीभित्र । हो,उनी बादी बालिकाहरुको भाग्य बदल्न चाहन्थिन । बादी महिलाको भाग्य बदल्न चाहन्थिन । र समग्र बादी समुदायको भाग्य बदल्न चाहन्थिन । र त्यसका लागि कसैले न नेतृत्व गर्नैपथ्र्यो । कसैले न कसैले कोसिस गर्नै पथ्र्यो । कसैले न कसैले जोखिम उठाउनै पथ्र्यो । कसैले न कसैले साहस गर्नैपथ्र्यो । हो, उनले त्यो कोसिस गरिन । जोखिम मोलिन । नेतृत्व गरिन समग्र बादी समुदायको । र उनकै नेतृत्वमा बादी समुदायको हकहीत र अधिकार प्राप्तीका लागि शुरु भएको संघर्षले सफलता प्राप्त ग¥यो ।
त्यही संघर्ष र सफलताले उनलाई संसारकै प्रभावशाली र प्रेरणादायी सय महिलाको सूचिमा पा¥यो ।
प्रेमलालसंगको प्रेम र बिबाह
वारी सत्ती । पारी बर्दियाको दौलतपुर । बीचमा निरन्तर बगिरहने कर्णाली । कर्णालीको किनारमा सत्ती । त्यही सत्ती किनारमा बिष्णुकान्तिपुरी । र त्यही विष्णु कान्तिपुरीमा हुर्किईन उमादेवी ।
सत्ती घाटको डुंगाको ठेक्का दौलतपुरका प्रेमलाल भट्टले पाएका थिए । उमादेवी दौलतपुर आउजाउ गरिरहन्थिन । र त्यही क्रममा उमा र प्रेमलालबीच भेट भईरहन्थ्यो । प्रेमलाल कहिले डुंगाको भाडा कम लिन्थे । कहिले भाडा नै लिन्थेनन । उमाका नजरमा प्रेमलाल पुरुष थिए । कथित उपल्लो जातका पुरुष । प्रेमलाल डुंगाका ठेकेदार थिए । बस्, ठेकेदार मात्र । तर विस्तारै प्रेमलाल उनलाई अरु पुरुषभन्दा फरक लाग्न थाले । राम्रो लाग्न थाले । उनको बोली र व्यवहारले छुन थाल्यो ।
कर्णाली नदीमा भएको त्यो भेट कतिबेला प्रेममा परिणत भयो । उनलै थाहै पाईनन । कर्णाली त तरिन । तर उनको मन भने प्रेमलालको प्रेमको भुमरीमा परिसकेको थियो, कहिल्यै ननिस्कने गरी ।
कर्णाली तर्दा तर्दै उनको जिन्दगीको डुंगाले नयाँ यात्रा तय गरिसकेको थियो । उनको जिन्दगीले असल माझी पायो, प्रेमलाल । जो उनको सहारा बने । भरोसा बने । हिम्मत बने । जसको अटुट साथ, विश्वास र मायाले उनी आफू मात्र विष्णु कान्तिपुरबाट निस्किईनन । उनले आफ्नो सिंगो वादी समुदाय र वादी चेलीहरुलाई त्यो बदनाम समय, बाटो र बिष्णुकान्तिपुरबाट बाहिर निकालिन ।
र त्यसका लागि उनले गरेका हरेक संघर्षमा प्रेमलाल उनीसंगै चट्टान झै उभिए । उमा सम्झिन्छन्, म सारी खोलेर सिंह दरवारको गेटमा चढ्दै गर्दा उनी मेरो सारी बटुलिरहेका थिए । म कसरी बिर्सन सक्छु, त्यो पल ?
उहाँ बिना म अधुरो छु । मेरो परिचय अधुरो छ,उनी सुनाउछिन्, उहाँको साथ नभएको भए सायद बादी आन्दोलन पनि अधुरो हुने थियो ।
शासकहरुका लागि ताजमहल प्रेमको प्रतिक हुन सक्छ । उमा र प्रेमलालको प्रेमले प्रेमको परिभाषा मात्र परिवर्तन गरेन । प्रेमको प्रतिक ताजमहल मात्र हुदैन भनेर देर्खाईदिए ।
प्रेमलालले उमादेवीसंगको प्रेममा घर छोडे । परिवार छोडे । उमादेवीसंग बिहा गरेपछि प्रेमलालका लागि उनका घरका ढोका सधैका लागि बन्द भए । प्रेमलाल दौलतपुरको धन दौलत छोडेर उनीसंगै सत्ती बस्न थाले । कथित उपल्लो जातका व्यक्तिले हाम्रो गुरुलाई बिगार्ने भनेर उमादेवीलाई गाली गरे ।
पैसासंग साटिने शरीर र सम्बन्धमा प्रेम खोज्नुको के अर्थ ? जहाँ प्रेम हुन्छ, त्यहाँ न यौवन प्यारो हुन्छ, न त शरीर । बस्, मान्छे प्रिय हुन्छ । त्यो मान्छेको हाँसो प्यारो । बोली प्यारो हुन्छ । र संसारमा त्यो भन्दा प्रिय पनि कोही हुदैन । सुन्दर पनि कोही लाग्दैन । उमा बैशमा बिछट्टै राम्री थिए भन्दिनन । भन्छिन्, म राम्री होईन । उहाँको मलाई हेर्ने नजर राम्रो थियो ।
सुन्दरताको परिभाषा यदि उसको बर्ण हेरेर गरिने हो भने कालो जति के कुरुप हुन त ? पक्कै होईन । सुन्दरता त मान्छेको हेराईमा निर्भर छ । सोचमा निर्भर पर्छ । दृष्टिकोणमा निर्भर पर्छ ।
मन प¥यो भने काली पनि बिछट्टै राम्री लाग्छे । मन परेन भने अति गोरीमा पनि खोट भेट्छ मान्छे । आँखाले गर्ने मूल्यांकन र दिमागले दिने परिभाषा भन्दा फरक हुन्छ, प्रेम । चोखो माया गर्नेले, न बर्ण हेर्छ । न रुप । न बिगत । न भविश्यका बारेमा चिन्ता गर्छ । प्रेमलाल र उमाले पनि भविश्यको चिन्ता गरेनन ।
उनीहरुको प्रेममा समर्पण थियो । विश्वास थियो । र थियो, अथाह भरोसा । प्र्रेम त्यही हो, जसको हात समातेर ढुक्कसंग हिड्न सकियोस, गर्न सकियोस जसमाथि आफूलाई भन्दा बढि विश्वास । जसको छातीमा अडेस लगाएर निर्धक्क सुत्न सकियोस । र जोसंग बिना संकोच साट्न सकिउन, मनका हरेक कुरा । जसले छोडी जाने मनमा डर नहोस । हो, यही हो प्रेम ।
प्रेमको परिभाषा के हो ? केलाई प्रेम भन्ने ? प्रेम त्यो होईन, जो कुनै चिजको प्राप्तिमा टुंगियोस । यो त अविछिन्न छ, जसको कुनै सीमा छैन । कुनै सिमान्त बिन्दु छैन । अव त पुग्यो । भयो । कसैले भन्छ भने त्यो प्रेम होईन ।
र रुप वा यौवन हेरेर हुने आकर्षण वा सम्मोहन पनि त प्रेम हुन सक्दैन । र यो लेनदेनको विषय पनि होईन । तिमी मलाई यो देउ । म तिमीलाई त्यस वाफत त्यो दिन्छु भन्ने हुदैन, प्रेममा । र यो किनेर पाईने चिज पनि त होईन । यो कतिबेला कोसंग बस्छ, थाह हुदैन । न उमेरको हद हुन्छ । न त जातभातको सीमारेखा । र यो गर्छु भनेर हुने चिज पनि होईन । भाषा, धर्म र भूगोलको सीमामा बाधिने कुरै भएन ।
घृणाले ठडिएको बर्लिनको पर्खाल प्रेमले भत्कायो । हो, जातभातले ठड्याएको बिभेदको पर्खाललाई उमा र प्रेमलालको प्रेमले भत्कायो ।
प्रेमलालसंग भागी बिहा हुदा उनी २१ वर्षकी थिईन । अहिले ५४ वर्षकी भईन । उनीहरुको माया उस्तै छ, प्रगाढ । उनीहरुका आफ्ना सन्तान छैनन । छोरा नजन्मिएपछि अर्को बिबाह गर्ने पितृसत्तात्मक सोच भएको समाजमा उनीहरुको माया भने सन्तान नहुदा पनि कम भएन । उमादेवीका बहिनीका छोराछोरीलाई नै सन्तान सरह व्यवहार गरे । पढाए । अहिले बहिनीका छोराछोरीहरु जागीरे भईसकेका छन् ।
बादी समुदायको हकहीत र अधिकारका लागि उनले गरेको संघर्ष जति उत्प्रेरणादायी छ । उनको प्रेम पनि त्यत्तिकै उदाहरणीय छ ।
४८ दिने आन्दोलन
२०४७ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो । ६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित संसदले राजतन्त्र फाल्यो । गणतन्त्र स्थापना भयो । व्यवस्था र शासक परिवर्तन हुदा पनि फेरिएन बिष्णुकान्तिपुरी ।
वादी समुदायको अवस्था फेरिएन । यही कुराले उमादेवी उद्देलित भईन । कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माएकी वादी चेलीलाई हुर्किदै गरेको छोराले प्रश्न गथ्र्यो, मेरो बाबा खोई ?
स्कुलमा भर्ना गर्दा शिक्षकले सोध्थे, बुवाको नाम के हो ?
नागरिकताका लागि प्रशासनमा लाईन लाग्दा सोधिने प्रश्न थियो, बुवा खोई ? बुवाको नागरिकता खोई ? कुमारी आमाबाट जन्मिएको छोरोले कहाँबाट ल्याओस बुवाको नागरिकता ? मेरो बुवा को हो ? भनेर छोराले प्रश्न गर्दा नाजवाफ हुनुपर्ने बाध्यता थियो, वादी महिलाहरुको ।
वादीका छोराछोरीहरुले दिनहु भोगिरहेको यही पीडाले उमादेवीलाई पोल्थ्यो । १० वर्षे माओवादी बिद्रोह बिस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत टुंगिदै गर्दा बिष्णुकान्तिपुरमा बिद्रोहको दियो सल्किदै थियो ।
उनले जिल्लामा बसेर वादी समुदायको माग पुरा नहुने ठानिन । र सिंह दरवारलाई नै घच्घच्याउने अठोट सहित २०६४ असार महिना राजधानी काठमाण्डौं लागिन ।
वादी समुदायको हकहीत, अधिकार र पुनस्र्थापनाका लागि उनले सरकार समक्ष २६ वटा माग राखेकी थिईन । बादी समुदायको पुनस्र्थापना, निशुल्क औषधी उपचार, आमाको नामबाट जन्मदर्ता, नागरिकता र बिबाह दर्ता, यौन शोषणमा परेका वादी महिलाहरुलाई आत्म सम्मान सहितको स्वरोजगार र स्थायी बसोबासको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
तर उनका माग सुनुवाइका लागि सरकार गम्भीर देखिएन । अन्तत उनले सिंह दरवारको गेटमा अर्धनग्न प्रदर्शन गरिन । सञ्चारमाध्यममा उनको आन्दोलनले महत्व पायो । त्यसपछि मात्र सरकारको ध्यानाकर्षण भयो । र सरकारले उनलाई वार्ताका लागि बोलायो । गिरिजा प्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री थिए । उनी प्रधानमन्त्री कोईरालालाई भेट्न बालुवाटार पुगिन । उनी डराउदै त्यहाँ पुगेकी थिईन । कही भित्र लगेर थुन्ने त होईन, उनको मनमा डर थियो ।
त्यहाँ पुग्दासम्म विश्वास लागिरहेको थिएन, कि सरकारले माग पुरा गर्नेछ । प्रधानमन्त्री कोईरालाले वादी समुदायका माग पुरा गर्ने बाचा गरे । वादी संघर्ष समितिसंग सरकारको दुई बूँदे सहमती भयो । पहिलो थियो, बादी समुदायका बच्चाहरुको भरण पोषण सहितको उच्च शिक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने । र दोस्रो थियो, वादी समुदायको निशुल्क औषधी उपचार सहित पुनस्र्थापना गर्ने ।
सरकारसंगको सहमतीपछि ४८ औं दिनमा आन्दोलन टुंगियो । र उनका मुख्य माग पुरा भए ।
जनता आवास कार्यक्रम शुरु भयो । वादी परिवारले पक्की घरमा बस्न पाए । यद्दपि जग्गा भएकालाई मात्र घर दिने व्यवस्था भएकोले जग्गा नभएका कतिपय परिवार यो सुबिधाबाट बञ्चित भए । बादीका सन्तानहरुले निशुल्क पढ्न पाउन थाले । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था शुरु भयो ।
यो सबै उमादेवी वादीको संघर्षबाट प्राप्त सफलता हो ।
विष्णु कान्तिपुरको नाम फेरिएर सूर्यपुर भएको छ । तर उनी यतिबाट सन्तुष्ट छैनन, भन्छिन्, वस्तीको नाम फेरिएर मात्र हुदैन । बादी समुदायको समग्र जीवन परिवर्तन नभएसम्म मेरो संघर्ष जारी रहने छ ।
सिएसजीको अध्यक्षदेखि सांसदसम्म
२०५५ सालमा बादीहरुको हकहीत र अधिकार प्राप्तीका लागि समुदाय सहयोग समिति(सिएसजी) स्थापना भयो । जसको संस्थापक अध्यक्ष थिए, लाल बहादुर नेपाली ।
२०६० सालमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि संस्थाको साधारण सभा हुदै थियो । उमादेवीले संस्थाको नेतृत्व गर्ने ईच्छा जताईन । उमेरले कान्छा, लालबहादुरलाई उनी भाई भन्थिन । उनले आफूलाई अध्यक्ष छाडिदिन भाईलाई आग्रह गरिन । जसको सवाल उसकै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने उमादेवीको भनाई थियो । तर नेपालीले अध्यक्ष पद नछाड्ने निधो गरे । किनकी सिएसजीमा अधिकांश सदस्य नेपालीले बनाएका थिए ।
उमादेवीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिईन । चुनाव भयो । नतिजा उमादेवीका पक्षमा आयो । भारी मतले उमादेवीले जितिन । चुनावमा हारजित भएपनि पछि दुबै जना मिलेर संस्था चलाए । बादीको हकहीतका लागि मिलेर संघर्ष गरे । सरकारले गठन गरेको वादी विकास समितिमा नेपाली सदस्य छन् ।
सिएसजी उनले नेतृत्व गरेको पहिलो संस्था थियो । उनी अनपढ थिईन । तर संघर्ष र अनुभवले खारिएकी उमादेवीको प्रगतीका लागि शिक्षा बाधक भएन । उनी काँग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय हुदै गईन ।
२०७४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्बाचनमा काँग्रेसले उनलाई समानुपातिक सूचिमा राख्यो । र चुनावपछि प्रदेश सभाको सांसद बनायो । सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सांसद रहेकी उनी बादी समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो महिला हुन् । नेपालमा ७२ जिल्लामा छरिएर रहेको बादी समुदायको कुल जनसंख्या करीव ६० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
उमादेवीको संघर्ष र सफलताको कथा बादी महिलाहरुका लागि मात्र नभएर हरेक जाती र बर्गका लागि प्रेरणादायी छ ।
उनी सपना बिहिन थिईन । उनको संघर्ष र सफलताको कथा भने धेरैको सपना बनेको छ । बादी समुदायका चेलीहरु भन्छन्, उमादेवी जस्तै बन्ने सपना छ ।
उनले जीवनमा कति पैसा कमाईन । थाह छैन । यही हो, उनले कमाएको सम्पत्ती ।
तीन दशक अगाडिको दरबन्दीमा चल्दै अञ्चल अस्पताल
उपेक्षित हौसलपुर स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा
जबर्जस्ती करणी आरोपमा युवा पक्राउ
चौबिसै घण्टा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन